Abaphakeli nabahlinzeki bokupaka izimoto | I-China Parking Lift Factory
Ukuphakamisa ukupaka kanye nohlelo lokupaka izimotongumkhiqizo obalulekile empilweni yethu yansuku zonke okwenza ukuthi indawo yokupaka izimoto iye incipha. Imishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu ingahlukaniswa ngemishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu, imishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu kanye nemishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu ezenzakalelayo ngokuphelele, kanye nemishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu ezisebenzisa umndeni, futhi ngokugcwele imishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu nayo ingahlukaniswa ibe yizingqimba ezimbili noma ungqimba oluningi oluyisicaba Imishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu, imishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu ezime mpo kanye nesakhiwo esimise okomshini othomathikhi mathathu.
I-wo Post Car Lift yamukela izindlela zokushayela ezibacindezela, umfutholuketshezi okukhipha uwoyela ophakeme ucindezela u-hydraulic silinda ukushayela imoto upakisha ibhodi phezulu naphansi, ukufeza inhloso yokupaka.Lapho ibhodi yokupaka izimoto iye endaweni yokupaka phansi, imoto Ungangena noma uphume.Offer ngokwezifiso
I-China Daxlifter Rotary platform car lift design ekhethekile ye-auto show, ubukhulu namandla angenziwa ngokwezifiso zakho. Ipulatifomu ejikelezayo yezimoto isebenzisa imoto esezingeni eliphezulu engenisiwe ukuqinisekisa ukuthi ipulatifomu ingahamba kahle futhi ijikeleze ngejubane elifanayo uma lisebenza.
I-China Four Post Custom Made yokupaka izimoto Phakamisa uhlelo lokupaka oluncane oludumile ezweni laseYurophu nezitolo ezi-4. Ukuphakamisa ukupaka kungumkhiqizo owenziwe ngokwezifiso olandela izidingo zethu zamakhasimende, ngakho-ke ayikho imodeli ejwayelekile ongayikhetha. , sazise imininingwane ethile oyifunayo
I-Tiltable Post Parking Lift yamukela izindlela zokushayela u-hydraulic, uwoyela we-hydraulic okukhipha uwoyela ophakeme ucindezela u-cylinder wokubacindezela ukushayela imoto yokupaka phezulu naphansi, ukufeza inhloso yokupaka.Lapho ibhodi yokupaka izimoto iye endaweni yokupaka phansi, imoto Ungangena noma uphume.
I-4 Post Lift Parking ingenye yezimoto ezithandwa kakhulu phakathi kwamakhasimende ethu. It kungokwalabo imishini yokupaka valet, okuyinto ifakwe uhlelo kagesi elawula. Iqhutshwa yisiteshi samapayipi wokubacindezela. Uhlobo olunjalo lokuphakamisa ukupaka lufanelekile kokubili imoto elula nemoto esindayo.
Kunezinzuzo eziningi ze ilifti yokupaka izimoto : Izinkomba zezinga eliphezulu zezobuchwepheshe nezomnotho Izinsiza zokupaka ezinamacala amathathu zinamandla okupaka amakhulu. Unyawo oluncane, luyatholakala Imishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu Imishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu (izithombe eziyi-8) Paka zonke izinhlobo zezimoto, ikakhulukazi izimoto. Kodwa-ke, ukutshalwa kwemali kungaphansi kwegalaji lokupaka ngaphansi komhlaba elinamandla afanayo, isikhathi sokwakha sifushane, ukusetshenziswa kwamandla kuphansi, futhi indawo yaphansi incane kakhulu kunaleyo yegalaji elingaphansi komhlaba. Ukubukeka kuhlanganiswa nesakhiwo, futhi abaphathi balula. Imishini yokupaka enezinhlangothi ezintathu ilungele kakhulu izinxanxathela zezitolo, amahhotela, izakhiwo zamahhovisi nezindawo zabavakashi. Amadivayisi amaningi ngokuyisisekelo awadingi opharetha abakhethekile, futhi angaqedwa ngumshayeli yedwa. Izinsiza ezi-3.Complete ezisekelayo kanye "nokuluhlaza" okungokwemvelo okuzenzakalelayo kwe-three-dimensional garage kunohlelo oluphelele lokuphepha, olufana nedivayisi yokuqinisekisa izithiyo, idrayivu yokuqinisa amabhuleki okuphuthumayo, idivaysi yokuvimbela ukuwa ngokungazelelwe, idivaysi yokuvikela ukulayishwa, idivaysi yokuvikela ukuvuza, ende ende futhi ephakeme kakhulu idivayisi Yokuthola imoto njalonjalo. Inqubo yokufinyelela ingaqedwa ngesandla, noma ingaqedwa ngokuzenzakalela ngemishini yekhompyutha, nayo eshiya indawo enkulu yokuthuthuka nokwakhiwa kwesikhathi esizayo. Njengoba imoto ihamba ngejubane eliphansi isikhathi esifushane kakhulu ngesikhathi senqubo yokufinyelela, umsindo nokukhipha kuncane kakhulu.